Kuuriyada Woqooyi oo aan sanadkan bandhiggeeda milatari lagu arkin gantaalladeeda riddada dheer - BBC News Somali
Kuuriyada Woqooyi oo aan sanadkan bandhiggeeda milatari lagu arkin gantaalladeeda riddada dheer
9 Sebtembar 2018
Kuuriyada Woqooyi ayaa markii ugu horreysay muddo sanado ah aanan soo bandhigin gantaalladeeda riddada dheer ee isaga kala goosha qaaradaha, xilli dalkaasi dhawaan laga xusayay 70 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay dalkaasi.
Sidoo kale ma cadda in hoggaamiye Kim Jong-un uu hadal ka jeediyay xafladdaasi bandhigga oo lagu soo badhigay keydka hubka ee dalkaasi.
Munaasabaddaasi ayaa astaan u noqoneysa quwada milatari ee dalkaasi, gaar ahaanna hubkiisa iyo saanaddiisa milatari iyo sidoo kale ballan qaadkii ahaa in uu baabi'inaayso hubkiisaa niyuukleerka.
Xeel dheerayaasha arrimaha milatariga qaarkood ayaa saadaalinayay in hoggaamiyaha dalkaasi uu debacsanaan muujin doono kaddib markii uu kal hore la kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Daandaansi ayaa loo arki lahaa haddii dalkaasi uu soo bandhigi lahaa keydkiisa gantaaladada riddada dheer ee gaari karaya gudaha dalka Maraykanka, isla markaana xambaari kara qumbuliyadaha niyuukleerka.
Kuuriyada Woqooyi: Xayiraad uma dhutinayno
Ilaa haatan lama baahin muuqaalada laga duubay bandhiggani milatari ee Pyongyang balse wakaaladda wararka ee AFP oo uu halkaasi weriye u jooga iyo shabakadda wararka ee NK News oo baahiyay muuqaallo laga soo xigtay telefishinka qaranka ee Kuuriyada Woqooyi ayaa waxa ay sheegeen in aanan la soo bandhigin wax gantaallo ah.
Bishii Juun ee sanadkan ayaa Trump iyo Kin Jong-Un waxa ay kala saxiixdeen heshiis aan faahfaah sanayn oo ujeeddadiisu ahayd sidii gacanka Kuuriya looga nadiifin lahaa hubka niyuukleerka balse heshiiskaasi kuma jirin wakhti cayiman iyo qaabka arrintaasi loo marayo.
Kulankaasi kaddib waxaa jiray wadahadallo heer sare ah iyo booqashooyin isdaba joog ah balse dhawaan ayaa waxaa la hakiyay booqasho uu xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ku tagi lahaa Pyongyang, waxaana labada dhinac midba midka kale ku eedeeyay gaabiska ku imaanayaa wada xaajoodyada, waxaase ay ku adkeysteen in ay ka go'antahay in horumar laga gaaro arrintan.
Weriyaha BBC-da ee Seoul ayaa sheegeysa in haddii Pyongyang ay soo bandhigi lahayd gantaaladeeda riddada dheer ay halis ku imaan lahayd wadahadallada la doonayo in lagu soo afjaro colaadda gacanka Kuuriya.
Kuuriyada Woqooyi ayaa sidoo kale lagu wadaa in dhawaan ay qabato bandhigyo waaweyn oo sanad kastaa lagu soo bandhiga dhaqanka, taariikhda iyo cududda milatari ee dalkaasi, waxaana sawirro laba usbuuc ka hor lagu qaaday Saterlaydka ay muujinayaan in bandhigyada sanadkani ay noqon doonaan kuwo aad uga ballaaran kuwii hore.
Bandhigyadii hore ayaa waxa la arki jiray dadka oo buux dhaafiya barxado waaweyn, waxaana Qaramada Midoobey ay kal hore sheegtay in carruurta xitaa lagu khasbo in ay bandhiggaasi ka qeyb qaataan.
Maxay tahay magaaladii ay geli waayeen ciidamadii Cismaaniyiinta?
Wax ka ogow taariikhda Mustafe Muxumed Cumar oo shan sano kale la doortay
Ninka sida kalinimada ah ugu nool dunida, qofkii uu arkana dilaya
Beeralayda jaadka oo fikir cusub helay kaddib markii ay ka quusteen Soomaaliya